အကောင်းဆုံး Alpha GPC အမှုန့် (28319-77-9) ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းစက်ရုံ
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Alpha GPC အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
အာလဖ GPC (28319-77-9) ဗီဒီယို
alpha GPC အမှုန့် Specifications
အမည်: alpha GPC
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် % ၅၀% နှင့် ၉၉% အမှုန့်； ၈၅% အရည်
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 257.223 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 142.5-143 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: Alpha GPC; ကိုလင်းine Alfoscerate; Alpha Glycerylphosphorylcholine
နာမ်: (R) -2,3-dihydroxypropyl (2- (trimethylammonio) ethyl) ဖော့စဖိတ်; sn-Glycero-3-phosphocholine
ဘဝတစ်ဝက်: 4-6 နာရီ
လျှောက်လွှာ: Alpha GPC (Choline Alfoscerate) သည် phospholipid တစ်ခုဖြစ်ပြီး choline biosynthesis နှင့် phosphatidylcholine ၏ catabolic လမ်းကြောင်းတွင်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ Alpha GPC ကို Nootropic အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Alpha GPC ဆိုတာဘာလဲ (28319-77-9)?
Alpha GPC သည် Nootropic Compound ဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီး ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ Alpha gpc nootropic သည်ကိုလင်း၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများ၏မှတ်ဉာဏ်နှင့်ကျုံ့ခြင်းကိုအထောက်အကူပေးသည့် neurotransmitter ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Alpha GPC သည်ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုရန်လုံလောက်သော်လည်း၊ ဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်နှင့် ဦး နှောက်စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေရန်လူသိများသည်။ ၎င်းနောက်အားကစားသမားများနှင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုမြှင့်တင်လိုသောမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်အလားအလာရှိသောအစားအစာဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
Alpha GPC (28319-77-9) အကြိုးခံစားခှငျ့
Alpha ဦး နှောက် nootropic သည် ဦး နှောက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သောစွမ်းရည်ကြောင့်သိမြင်မှုတိုးတက်မှုအတွက်လူသိများသည်။ ၎င်းသည် choline ပုံစံကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ Alpha GPC အများစုသည်စိတ်နှင့်ကြွက်သားများကိုအာရုံစိုက်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအွန်လိုင်းမှတင်ထားသော alpha brain nootropic ပြန်လည်သုံးသပ်မှုက၎င်းသည်သူမ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်လိုသူတိုင်းအတွက်ဤဆေးသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
လေ့လာမှုများအရ alpha gpc ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းသည်ခြောက်ရက်ထပ်တိုးပြီးနောက်ကိုယ်ခန္ဓာအင်အားထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်ထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကြံ့ခိုင်မှုဝါသနာရှင်များနှင့်အားကစားသမားများသည်သူတို့၏ကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် isometric ခွန်အားမြှင့်တင်ရန် Alpha GPC အမှုန့်ကိုသူတို့၏အစားအစာထဲသို့ထည့်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ Alpha gpc အကြိုလေ့ကျင့်ခန်းစနစ်သည်အားကစားယောက်ျားများအကြားတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်အတန်းသို့တက်လှမ်းကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲလေ့လာမှုတစ်ခုအရတစ်နေ့လျှင် Alpha ဦး နှောက် nootropic ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ကိုသုံးခြင်းသည် ၃ လမှ ၆ လအတွင်း Alzheimer လူနာများအတွက်အသိဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစွာတိုးတက်စေသည်ဟုဆိုသည်။ Alpha GPC ကိုနေ့စဉ်ဆေး ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်သောက်ခြင်းသည်သွေးကြောဆိုင်ရာစိတ်ဖောက်ပြန်မှုလက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ Alpha gpc dopamine သည်စိတ်ရှည်ခြင်း၊ အပြုအမူနှင့်ဉာဏ်ရည်စွမ်းရည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ယာယီကူးစက်ရောဂါ (TIA) ကိုခံစားနေရပြီး ၁၀ ရက်မတိုင်မှီ alpha GPC ကိုခံယူသောလူနာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြန်လည်နာလန်ထူမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုတေသနအရ Alpha GPC ကိုနေ့စဉ် ၂၈ ရက်ကြာ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ထိုးပေးပြီးနောက် ၆ လလုံးလုံး Alpha GPC သောက်သုံးမှုဖြင့်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဥာဏ်ရည်ပြန်ကောင်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဟုသုတေသနပြုချက်ကဖော်ပြသည်။
alpha GPC (28319-77-9) ကိုအသုံးပြုသည်?
ထို့အပြင် Choline Alfoscerate နှင့် L-Alpha glycerylphosphorylcholine ဟုလည်းလူသိများသော Alpha GPC အမှုန့်သည် PHOSPHATIDYLCHOLINES သို့မဟုတ် LECITHINS ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင် GLYCEROL ၏ hydroxy အုပ်စုနှစ်ခုသည်ဖက်တီးအက်စစ်များဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ Choline Alfoscerate သည် ဦး နှောက် phospholipids ၏ biosynthesis ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်အာရုံကြောတစ်သျှူးတွင် choline ၏ဇီဝရနိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ Choline Alfoscerate ကို Alzheimer Disease ရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Alpha GPC အမှုန့်သို့မဟုတ် Alpha Glycerylphosphorylcholine တို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း Choline Alfoscerate ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသောယနေ့ခေတ်တွင်ရရှိနိုင်သော choline ဖြည့်စွက်ချက်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ AlphaGPC သည်လူကြိုက်များပြီးထိရောက်သောကိုလက်စ်၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိရှိပြီးသွေး ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုအလွယ်တကူဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပဲပုပ်လက်ဆီရည်မှသန့်စင်ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးကိုလင်းရင်းမြစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ချက်အနေဖြင့် Alpha GPC သည်သင်၏ ဦး နှောက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Alpha GPC ၏အတွေ့အကြုံသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျားလေးများကိုနေ့စဉ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်နေ့စဉ်သောက်သုံးမှုများသည်မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်မှတ်မိစေမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများစမ်းသပ်မှုများ၌ဖြည့်စွက်ဆေးသည်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကိုတိုးတက်စေသည်။ သွေးကြောဆိုင်ရာစိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများဆိုင်ရာအခြားလေ့လာမှုများ၊ Alpha GPChelped သည်သိမှတ်မှုအားပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်မရှည်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
alpha GPC (28319-77-9) သောက်သုံးသော
Alpha GPC သောက်သုံးမှုသည်၎င်းတို့သောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်လူတစ် ဦး အတွက် Alpha GPC သောက်ရန်သောက်သုံးသောပမာဏသည်မီလီဂရမ် ၃၀၀ မှ ၆၀၀ မီလီဂရမ်အထိရှိသည်။
သို့သော်အားကစားသမားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ပုံမှန်ဆေးပမာဏမှာ ၆၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်နဲ့ကြွက်သားတွေကိုအားကောင်းစေတယ်။
သိပ္ပံနည်းကျကျဆင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုခံစားနေရသောလူများသည်ကွဲပြားခြားနားသော Alpha GPC သောက်သုံးမှုရှိသည်။ ၄ င်းတို့၏သောက်သုံးသောဆေးပမာဏကို ၄၀၀ မီဂရမ်စီခွဲခြား ထား၍ တစ်နေ့လျှင်စုစုပေါင်း ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်ခွဲသည်။
သုတေသနပြုချက်များအရ Alpha GPC ၏ပါးစပ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်မီလီဂရမ် ၃၀၀ ဝန်းကျင်မှ ၆၀၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးသောအခါအထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးသူသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများမယူမီ ၃၀၀-၆၀၀ အထိသောက်သုံးပါကစတင်သင့်သည်။
အရွယ်ရောက်သူများအတွက်တစ်နေ့လျှင်အကြံပေးနိုင်သော Alpha GPC သောက်သုံးသောပမာဏသည် ၃၀၀-၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သောက်သင့်သည်။ အကြံပြုထားသောဆေးများတွင်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်ခြင်းသည်သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင့်လျော်သောသောက်သုံးသောပမာဏကိုလိုက်နာပါကဖြည့်စွက်ဆေးသည်ပိုမိုထိရောက်သည်။
alpha GPC အမှုန့် ရောင်းမည်(Alpha GPC အမှုန့်များကိုမည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Alpha GPC အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊
Ricci A, Bronzetti E, Vega JA, Amenta F. Oral choline alfoscerate သည်ကြွက်များ၏ hippocampus ရှိမော့စ်အမျှင်များ၏အသက်အရွယ်ကိုမှီခိုနေသည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုတန်ပြန်သည်။ Mech အိုမင်း Dev ။ 1992; 66 (1): 81-91 ။ PubMed PMID: 1340517 ။
Amenta F၊ Ferrante F၊ Vega JA၊ Zaccheo D. ကာလရှည်ကာလရှည်ဓာတ်ဆီကုသမှုသည်ကြွက် ဦး နှောက်တွင်အသက်အရွယ်အားဖြင့်မှီခိုနေသည့် microanatomical ပြောင်းလဲမှုများကိုတွက်ချက်သည်။ Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994 စက်တင်ဘာ; 18 (5): 915-24 ။ PubMed PMID: 7972861 ။
ကြွက် ဦး နှောက် cortex အတွက် Amenta က F, Del Valle က M, Vega ဂျေအေ, Zaccheo Age ကြွက် ဦး နှောက် cortex အတွက်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ: ကိုလင်း alfoscerate ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Mech အိုမင်း Dev ။ 1991 ဒီဇင်ဘာ 2; 61 (2): 173-86 ။ PubMed PMID: 1824122 ။